Logitech Craft, keyboard kacha mma iji rụọ ọrụ? Anyị na-enyocha ya | Akụkọ akụrụngwa
Logitech Craft, keyboard kacha mma iji rụọ ọrụ? Anyị na-elele ya
Ihe Logitech na-arụ nnukwu ọrụ na -emepụta akụkụ maka PC anyị bụ ihe anyị na-agaghị achọpụta ugbu a, nke ahụ doro anya. Mana ọ naghị afụ ụfụ ịnweta ụfọdụ ozi gbasara ngwaahịa ọhụrụ yana yabụ na anyị nwere ike itu nke bụ ịzụ ahịa kachasị mma dabara na mkpa anyị.
Dị ka ị hụworo, anyị nwere keyboard na aka anyị Logitech Craft, keyboard nhọrọ nke nwere ihe ọ bụla ọ ga - abụ ka ọ bụrụ keyboard kacha mma mgbe ọ bịara ọrụ. Ngwá ọrụ ndị ahụ niile na-eme ka ọrụ anyị dị mfe bụ itinye ego dị mkpa, yana ọ nwere ike ọ bụghị obere na Logitech Craft, chọpụta ya na anyị.
Anyị na-ahapụ gị dị n'elu vidiyo nke ndị ọrụ YouTube anyị na ọwa TodoApple ha na nwa oge gara aga ha nwalere Logitech Craft, agbanyeghị, ugbu a anyị nwere ya iji nwalee ya ebe a na Actualidad Gadget na anyị ga-agwa gị ihe ahụmịhe anyị nwere n'uju. O doro anya na anyị anaghị eche ihu na ngwaahịa dị ọnụ ala, ma ọ nwere ike bụrụ otu n'ime keyboards kachasị emegharịrị maka ebe ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'ahịa. Ugbu a ọ bụ ire ere maka euro 115,90 na Amazon (njikọ), ọnụahịa kacha mma ọ nwere ruo taa.
1 Design: Minimalist, adịchaghị na anya na-adọrọ adọrọ
2 Igodo: Njem, ergonomics na mkpọtụ
3 Backlight na obodo kwụụrụ
4 Nhọrọ Logitech, na pịa akara
Design: Minimalist, adịchaghị na anya na-adọrọ adọrọ
Site na nka Logitech nka ihe mbu nke dakwasiri ayi, n'enweghi obi abua, bu uzo ya di na onu ya. Na elu akụkụ dara ebe okpueze a gbaa gburugburu na mpaghara aka ekpe ebe aka nri di elu nwere a Informational ikanam. Ọnụ dị n'elu nwere mgba ọkụ iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ngwaọrụ ahụ kpamkpam Ọdụ USB-C nke anyị ga-akwụnye batrị gị. Nke mbụ kwesịrị ịrịba ama, nke nwere batrị agwakọta kama batrị.
Anyị nwere nhazi ọkọlọtọ nke nwere mkpụrụedemede ọnụọgụ aka nri, kedu ka ọ ga - esi bụrụ na uzọ ọzọ iji rụọ ọrụ. Ogologo a enweghi ike idozi, ọ bụ ezie na ọ nwere ntakịrị mmasị n'ihi isi ya. Akụkụ ala nke kiiboodu nwere akwụkwọ mgbochi kpochapụla kpochapụwo, n'ezie, keyboard ahụ siri ike n'agbanyeghị ya ntakiri, ma ọ naghị esi na saịtị ahụ abanye mgbe ị na-ede ihe. Ibu arọ ahụ abụghị ihe dị ịrịba ama maka ngwaahịa nke njirimara ndị a na ihe ndị ahụ na-eche na ha siri ike ma wue ya nke ọma, dịka a tụrụ anya ya. Obere ihe banyere imewe nke Logitech Craft nke mara mma ma di ntakiri, o ghaghi adi nma na desktọọpụ ọ bụla kwesiri nnu ya.
Igodo: Njem, ergonomics na mkpọtụ
Igodo nwere okpokoro dị larịị, na-emegide ihe anyị na-atụkarị anya site na keyboard nke raara nye ọkachamara ọkachamara. Otú ọ dị, a na-edozi nke a na mmiri miri emi na igodo ọ bụla, nke a na-eme na ọ bụ ezie na igodo ahụ adịghị agba n'etiti otu na onye ọzọ, ọ dịịrị anyị mfe ịmata ha ma si otú a nwee ike pịnye na-enweghị nnukwu njehie. Obi abụọ izizi na keyboard nke nwere ụdị imepụta a bụ nkasi obi mgbe ị na-ede, mana ụmụ okorobịa nọ na Logitech jisiri ike dozie ya.
Na ọkwa nke njem, o doro anya na anyị nwere ike ịbụ na ọ dị anya site na keyboard, mana ọ na-enye ụzọ zuru oke na amata iji nwee ike ịrụ ọrụ ide na idezi n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nzaghachi ahụ dị ngwa ma ogologo oge iji zere nrụgide mkpịsị aka anyị ma ọ bụrụ na anyị ede ederede ogologo oge, ihe a na-ahụkarị na mpempe akwụkwọ mmebi. Ọ naghị akpata ihe mgbu n'ogologo ma ọ dịkarịa ala ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ inwe oghere concave na leta ọ bụla, N’agbanyeghi na o bu onye na-acho igodo nke ogologo njem igodo ya rue ugbu a, Logitech Craft agbanweela obi m.
Backlight na obodo kwụụrụ
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe kacha baa uru maka ahụike nke anya anyị, ọ bụghị ole na ole n'ime anyị ka a na-amanye ịrụ ọrụ mgbe mgbe n'abalị, na-enwe obere ọkụ ọkụ. Nke a na - eme ka ọrụ sie ike ma a bịa na idezi foto, vidiyo ma ọ bụ ijikwa ụfọdụ imewe na mmemme ọfịs chọrọ nke na - abụghị isi njikọta. N'ihi yaAnyị ndị na-etinye ndụ anyị na kọmputa na kọmputa nwere ụfọdụ nhọrọ maka keyboards.
Njikọ njikọta ihe site na RF
Nkwado maka 3 ngwaọrụ dị iche iche na ebe nchekwa, otu-aka mgba ọkụ
Ngwa ọrụ Logitech a nwere ọkụ azụ, dịka enweghị ike ịtụ anya ma ọ bụghị. O sina dị, Ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ a, anyị ga-ahụ otu ndụ batrị si ebelata nke ukwuu n'agbanyeghị ntọala nchapụta dị iche, nke mere na ọ ga-adị mfe ịda na Daysbọchị 10 nke ojiji ọ bụrụ na anyị nwere nhọrọ a arụ ọrụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịmara na ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka K800 na-adị mfe iru ọnwa eji eme ihe, ya bụ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na batrị bụ akụkụ kachasị njọ nke nka Logitech Craft, ma ọ bụrụ na ịchọghị ìhè azụ nke ihe kachasị nghọta bụ kwụsị ya.
Nhọrọ Logitech, na pịa akara
Ngwá ọrụ dị mkpa iji nweta ọtụtụ n'ime Logitech Craft bụ sọftụwia ya, Nhọrọ Logitech Ọ bụ ngwa ọrụ Logitech na-enye ndị ọrụ iji hazie ụdị ngwaọrụ a pụrụ iche, nke ahụ bụ nsogbu ahụ, na m, Logitech Nhọrọ etinyela ya na macOS n'ihi na m na-eji ụdị MK850, agbanyeghị, obere ịhazi ihe karịrị ekwuru m na achọtara m onwe m na nka Logitech.
Dikpọ oku bụ n'ezie ọla dị na okpueze, ị nwere ike iyiokpueze ka iwelie arụpụtaghị ihe na arụmọrụ gị, Na-agba ọsọ iji nweta ndebiri slide na PowerPoint na nhọrọ nke ụdị font na ụcha akara na Okwu. Otu ihe a na - eme na Pixelmator, PhotoShop ma ọ bụ Final Cut, ị ga - adaba na ịhụnanya a nke ga - enyere gị aka ịnyagharịa ngwa ngwa, ozugbo ị ghọtara na ọtụtụ ngwa nwere ike maka ngwa a dị mma adịghị. Ọchọrọ mmepe n'azụ, na maka nke a, Logitech kwesịrị ịrụ ọrụ karịa ụfọdụ ụdị. Agbanyeghị, na macOS nke bụ eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọkachasị na mmemme edezi, enwerekwa ekele maka ya. Otú ọ dị, nke bụ eziokwu bụ na thekpọ oku bụ ihe nke onye nkwado karịa ebum n’uche maka nke a keyboard. N'okwu m, emeela m mpempe akwụkwọ iji rụọ ọrụ njikwa multimedia.
Nwere ike nweta ya na ọnụahịa kacha mma na njikọ a EGO Anyị na-ahapụ ya ka Amazon, ebe i nwere ike iri uru nke gị pụrụ iche ego.
A mara mma, minimalist na mma-wuru imewe
Ezigbo njem njem, nkasi obi na ịrụ ọrụ
Backlight na-ewu na-batrị
Ọ bụghị kemeghi n'ịdị elu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Logitech Craft, keyboard kacha mma iji rụọ ọrụ? Anyị na-elele ya
Etu esi lelee FC Barcelona niile na Real Madrid CF preseason n'efu